हाम्रो म्याग्दीमा ! दरबन्दी सुन्य, नतिजा अब्बल | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार हाम्रो म्याग्दीमा ! दरबन्दी सुन्य, नतिजा अब्बल
हाम्रो म्याग्दीमा ! दरबन्दी सुन्य, नतिजा अब्बल
२०७६, २३ असार सोमबार २२:५८
माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई)को नतिजामा सामुदायिक विद्यालयबाट राष्ट्रिय मावि नेप्टेचौरका निशान चोखालले ३.७० जीपिए ल्याए । नीजी विद्यलायसँग प्रस्तिपर्धामै नतिजा ल्याउन सफल राष्ट्रिय माविले विगतका बर्षदेखि नै सन्तोषजनक नतिजा ल्याइरहेको छ । बेनी नगरपालिका वडा नं ९ मा अवस्थित विद्यालयमा मावितहमा दरबन्दीको शिक्षक ब्यवस्था गर्न नसक्दा नीजि स्रोतकै भरमा चलाइरहेको छ। जिल्लाकै मंगला गाउँपालिका वडा नं १ कुहुँ पूर्णगाउँको राष्ट्रिय जनजागृति माविको अवस्था पनि उस्तै छ।विद्यालय सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय जनजागृतिले महायज्ञ, चन्दा संकलन, देउसीभैलो, घाँस–दाउरा समेत बेच्ने गरेको छ।
त्यस्तै रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेमा अवस्थित रघुगंगा मावि र मौवाफाँटको ज्ञानोदय मावि सामुदायिक विद्यालयमा पनि मावितहमा दरबन्दी छैन् । दरबन्दी नभएका यी केही विद्यालय उदाहरण मात्रै हुन् । जिल्लामा अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेका माविमा दरबन्दीकै अभावमा समुदायको आर्थिक सहयोगमा पठनपाठन भइरहेका विद्यालयले हरेक बर्ष नतिजा सुधार गर्नेमा अगाडी छन् । विद्यालय स्थापनाको दुईदशक वित्दासमेत मावि कोटामा दरबन्दीका लागि विद्यालयले अनैकौ प्रयास गरेपनि सफल हुन नसकेको राष्ट्रिय मावि नेप्टेचौरकी प्रधानध्यापक तारा चोखालले बताईन् ।
‘समयमा तलब दिन नसक्दा ऋण खोजेर ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ,‘समुदायको चन्दाले मात्रै सम्भव छैन’ चोखालले भनिन् ।विद्यालयमा आधारभु तह १–५ मा स्थायी दरबन्दी ५ जना र ६–८ मा दुई राहत शिक्षक बाहेक सम्पुर्ण नीजि स्रोतबाट ब्यवस्थापन गरिएको छ । विद्यालयले मासिक ८० देखि १ लाखसम्म नीजि स्रोतबाट तलब जुटाउनुपर्ने बताईन् । तलब सुविधाकालागी विद्यालयले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाले शैक्षिक गतिविधिमा प्रयाप्त ध्यान दिन नसकिएको चोखालको भनाई छ ।
विद्यालयले नीजि स्रोतमा शिक्षक राख्दा विषय अनुसारका शिक्षक नपाउने तथा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै जाने चिन्ताले केही विद्यालयले आर्कषक तलबको ब्यवस्था गरेर समेत शिक्षकलाई टिकाउने गरेका छन् । ‘लाहुरे स्वागतबाटै शिक्षकलाई तलब जुटाउने गरेका छौ,‘प्रयाप्त दरबन्दी भए जिल्लाकै उत्कृष्ट नतिजाका लागी तयार छौ’ राष्ट्रिय जनजागृति माविका प्रधानध्यापक टेक राम्जालीले भने । उनका अनुसार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा समेत आर्थिक सहयोग जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले गाउँपालिकाले सुन्य दरबन्दीका विद्यालयलाई बार्षिक उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानले केही राहत महसुस गरेपनि अन्य स्रोतको खोजीमा समय दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । विद्यालयमा कक्षा ६–१० नीजि स्रोतबाटै शिक्षक ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । दरबन्दी नभएका विद्यालयले शैक्षिकसँगै अतिरिक्त क्रियाकला बाहेक चन्दादातालाई सम्मान सहित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि समस्या समाधानको अपेक्षा गरिएको थियो,‘जनप्रतिनिधि आए तर, समस्या उस्तै छन्’ एक प्रधानध्यापकले भने । स्थानीय तहको बजेटमा विकास निर्माण केन्द्रित योजनामा सिमित हुने गरेकाले सुन्य दरबन्दीका विद्यालयहरूलाई सकस भएको उनको गुनासो छ ।विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने खर्चलाई शिक्षकको तलबमा सहयोग गर्न गरिएको अनुरोधलाई कर्मचारीबाटै अवरोध भएको समेत विद्यालयको गुनासो छ ।
यता शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख दलबहादुर थापाले सुन्य दरबन्दीको समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताए। ‘केहीको नतिजा अब्बल छ भने केही नाजुक अवस्थाका पनि छन्’ थापाले भने । उनले दुर्गम क्षेत्रमा सुन्य दरबन्दीका कारण समयमै शिक्षक ब्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको बताए । आवश्यक दरबन्दीको ब्यवस्थापन गर्न सकेमा विद्यालय प्रशासनलाई गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न सहज हुने बताए ।
२० माविमा सुन्य दरबन्दी
जिल्लामा रहेका २० विद्यालयको मावि तहमा सुन्य दरबन्दी रहेको छ । दरबन्दीको अभावमा विद्यालयले नगद चन्दादेखि घाँसदाउरा विक्री लगाएत घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । जिल्लामा दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा केही विद्यालयमा थुप्रिएका शिक्षकलाई दरबन्दी नभएका विद्यालयमा पठाउन नसक्नुमा राजनीतिक दबाब लगाएतका कारण छन् । केही विद्यालयको विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक बढी भएपनि केही विद्यालयमा शिक्षक नहुदाँ तह घटाउने सम्मको चेतावनी विद्यालयले दिने गरेको छ ।
माविमा सुन्य दरबन्दी हुने विद्यालयमा त्रिभुवन मंगला मावि, जनता मावि दग्नाम, गौवोम बस्त्र मावि देविस्थान,राष्ट्रिय मावि घतान, राष्ट्रिय जनजागृति मावि कुहुँ, जनकल्याण मावि गुर्जा, शिद्धशान्ति मावि हिदी, रितुङ मावि, कुईनेमंगले लमसुङ मावि, लुलाङ, बुद्धिविकास मावि मुदी, चन्द्रज्योती मावि मुदी,धनजनता मावि मुना, निस्कोट मावि, निस्कोट, दिपक मावि, पात्लेखेत, ज्ञनोदय मावि, रघुगंगा मावि, पिप्ले, रामचन्द्र मावि, अर्जम,अमरज्योती मावि रुम, सरस्वती मावि तातोपानी, सिद्धार्थ मावि चिउरीबोट रहेका छन् । दरबन्दी नभएका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा नाजुक देखिएका विद्यालयहरू पनि छन् । यसबर्षको एसईईमा सुन्य दरबन्दी भएका विद्यालयहरूको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिएमा जिल्लाको नतिजालाई गण्डकी प्रदेशमै प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
५१ सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी छैन्
जिल्लाका ५१ सामुदायिक विद्यालय सरकारी दरबन्दीका शिक्षकबिना सञ्चालन भएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले दिएको जानकारी अनुसार कक्षा १–५मा ९ विद्यालय, ५–८ कक्षा भएका २२ विद्यालय र माविमा २० विद्यालयमा शून्य दरबन्दी रहेको जनाइएको छ । चन्दा सङ्कलन र तिहारमा देउसीभैलो खेलेर शिक्षक पाल्ने गरेपनि केही विद्यालयले चन्दा जुटाउन नसक्दा ६ महिनासम्म तलब ब्यवस्थापन गर्न नसकेका छैनन् ।
आर्थिक स्रोतको अभावमा आधारभुत तहमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजीको शिक्षक नपाउने गरिएको मंगला माविका शिक्षा शाखाका डेकबहादुर बानियाँले बताए । स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान, व्यवस्थापनमा पहल गर्न सकेमा तत्काल केही राहत हुने भएपनि संघीय र प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा समस्या थप जटिल भएबो बताए । शून्य दरबन्दीका सामुदायिक विद्यालयको सहयोगका लागि मङ्गला र धवलागिरि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेकाले केही राहत मिलेको विद्यालयले जनाएको छ ।
Previous articleपरीक्षामुखी तयारीको अन्त्य गर्नुपर्छ
Next articleमनसुन सक्रिय, आगामी चार दिनसम्म देशका अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना